Iglasi ngoku lucingo oluqhelekileyo lwasekhaya lwee-balcony guardrails. Ngoku, Iingcingo zeglasi zeentlobo zebhalkhoni ikakhulu zenziwe ngeglasi enobushushu. Iglasi wobulali iglasi ukhuseleko. Iglasi enomsindo ngokwenene iluhlobo lweglasi exinyiweyo.
Iglasi ngoku lucingo oluqhelekileyo lwasekhaya lwee-balcony guardrails. Ngoku, Iingcingo zeglasi zeentlobo zebhalkhoni ikakhulu zenziwe ngeglasi enobushushu. Iglasi wobulali iglasi ukhuseleko. Iglasi enomsindo ngokwenene iluhlobo lweglasi exinyiweyo. Ukuphucula amandla eglasi, Iikhemikhali okanye iindlela zomzimba zihlala zisetyenziselwa ukwenza uxinzelelo kuxinzelelo kumphezulu weglasi. Xa iglasi iphantsi kwemikhosi yangaphandle, kuqala urhoxisa uxinzelelo lomaleko womphezulu, ngokwenjenje siphucula amandla okuthwala kunye nokwenza ukuba iglasi yoxinzelelo lweglasi yayo, kubanda nobushushu, ifuthe.
Ukucetyiswa kwe-collocation ye-tubing yoyilo lweentyatyambo
Ukubamba ngesandla(mm) 80*40*1.5 Ityhubhu ekhubazekileyo
Ityhubhu yesikwere 40*40*1.2
Ityhubhu yesikwere 32*32*1.0
Ityhubhu yesikwere 19*19*1.0
Ityhubhu yesikwere 16*16*0.8
Uthotho lomjikelezo wocingo
Ukucetyiswa kolungelelwaniso lweetyhubhu kocingo lweperimeter
Post(mm) 50*50*1.2 Ityhubhu yesikwere 40*40*1.2 Ityhubhu yesikwere
50*50*1.2 Ityhubhu yesikwere 40*40*1.2 Ityhubhu yesikwere 40*40*1.2 Ityhubhu yesikwere
Uloliwe(mm) 40*40*1.2 Ityhubhu yesikwere 40*40*1.0 Ityhubhu yesikwere
32*32*1.2 Ityhubhu yesikwere 32*32*1.0 Ityhubhu yesikwere 32*32*1.0 Ityhubhu yesikwere
Ipikethi(mm) 19*19*1.0 Ityhubhu yesikwere 16*16*1.0 Ityhubhu yesikwere
19*19*1.0 Ityhubhu yesikwere 16*16*0.8 Ityhubhu yesikwere 16*16*0.8 Ityhubhu yesikwere
Inkcazo Iprofayile yealuminium extrusion
Unyango oluphezulu Kugqityiwe uMill; Ukuchongwa; Powder wawutyabeka; Iinkozo zomthi; Umbane; Ukushicilelwa kobushushu
Ixabiso ISouth China Metal Exchange / i-LME yexabiso lealuminium + iindleko zokuguqula ezona khuphiswano
Nkqubo zomngundo Into nganye ethengiweyo yevolumu iya kwi 3 iitoni, ukubuyiselwa kwemali yentlawulo
Ixesha lokuzisa Isampulu nge 15 iintsuku; Umyalelo onesidima nge 15-30 iintsuku
Ixesha lokuhlawula 30% idiphozithi, intlawulo eseleyo kuthunyelwe ngenqanawa (UMSEBENZI); Okanye 30% idiphozithi, intsalela ibhatalwa ngokuchasene neB / L ikopi ngaphakathi 7 iintsuku
Ukupakisha umgangatho Ifilimu ekhuselweyo kunye neeperile zomqhaphu ngaphakathi kunye nokuncipha ifilimu ngaphandle
Isampulu Isampula yasimahla ( ubunzima obungaphantsi 2 IKG) ingathunyelwa ngesicelo
Umgangatho Yamkela uvavanyo lomntu wesithathu
Ixesha lesiqinisekiso Ukuba iimveliso ezithunyelweyo azinako ukuhlangabezana neemfuno ezifunekayo, isixa semali sisonke siya kubuyiselwa ngaphandle kokulibazisa, okanye ulungelelanise imithwalo emitsha endaweni yoko
Izinto eziluncedo zeglasi yocingo lwebhalkhoni:
1.Ukuchasana nefuthe: yomelele kwaye yomelele, amandla aneempembelelo eziphezulu. Ubomi obude: utyalo-mali lwexesha elinye, ungonwaba ubomi bonke.
2.Ukumelana nemozulu elungileyo: ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi, Ukuxhathisa ityuwa yokutshiza, nokumelana ukufuma. Iindleko zokugcina eziphantsi: ulondolozo-free kwaye kulula ukuyicoca. Ukusuka kwimixholwana, izixhobo zokupenda, iimveliso zebranti zisetyenziselwa ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
3.Ukuphuculwa kokhuseleko: Emva kokuba iglasi eyomeleleyo yonakaliswe kakhulu, iya kubonisa ngokukhawuleza amasuntswana amancinci we-obtuse, ngokwenjenje kuqinisekisa ukhuseleko lomntu kuye umda. Ukusetyenziswa: ifanitshala, elektroniki kunye noshishino lombane, ulwakhiwo, imboni yomhombiso, igumbi lokuhlambela, imoto.
Zilungele izinyuko zangaphakathi nangaphandle, Iibhalkoni, iifestile ezisemgangathweni, Ukuvulwa kwezithuthi ezizihambelayo, iglasi yomkhusane eludongeni zokubambelela kunye namaqonga, Iipaseji zorhulumente kunye nezakhiwo zeshishini iiGrafrails, njl.
Iimpawu：Aluminium Kucingo olubiyele ngeglasi, Imveliso yeglasi yeAluminiyam, thenga imveliso yeMveliso yeglasi yeAluminiyam, Umgangatho ophezulu weAluminiyam olubiyele ngeglasi